Mazda batira pekugara - China Ningbo Beilun Daqi Hongxiang
Mazda batira Housing
High unhu customized aruminiyamu kufa vachikanda chakuvhuvhu / tooling / kufa & chikamu
Nzvimbo Origin: Zhejiang, China (Mainland)
Model Number: HX10091die vachikanda muforoma
Kuumba Mode: Die tichiwisira
Pakuumba technics: kufa kuraswa
Kavha: Wooden bhokisi
Mould zvokunyama: DIEVAR, SKD61, H13,8407, etc.
Mould nechigadziko: Standard C45
Mould upenyu: 50000shots kuti 100000 kwepfuti
Product Name: yepamusoro aruminiyamu ufe Kudzingwa muforoma
advertising: ISO9001: 2008
Pamusoro kurapwa: Kupisa kurapwa
Isa mumwe aruminiyamu ikafa Kudzingwa muforoma mubhokisi emapuranga
zvikamu mhando HX10091
kuumbwa technics Die vachikanda
zvinhu ADC12, A380, AlSi12, A356, ZL102, YL104, YL112, YL113,
uye vazhinji nevamwe aruminiyamu chiwanikwa zvinogamuchirika zvose.
divi Sezvo vanodhirowa kana ivhu
pamusoro kurapwa Sandblasting, Painting, powder unhani, Anodize,
kwakakurudzira, Chrome yakanamirwa pamifananidzo, nickel yakanamirwa pamifananidzo, etc.
Die vachikanda anoumba mhango Single kana Multiple
zvinhu H13, DIEVAR, QDN, 8407,2344V, TQ1,2343, SKD61,
45 # simbi, etc.
Heat kurapwa Akaomesa, Nitriding
pokuoma HRC50 ~ 55
muforoma mamiriro Advanced design, itsva mamiriro, High nemazvo,
Quality zvinhu, Long mupenyu, Short Delivery nguva
midziyo CNC zvakarurama muforoma achiita zvokutemera muchina, CNC achiumba muchina,
CNC pakona, EDM, Linear nokuveza muchina, Die kusvibisa muchina (200T),
Die vachikanda muchina (180T ~ 1250T), Lathe, Kukuya muchina;
CMM, Material detector, kuwoma bvunzo mudziyo, spectrograph, etc.
Software CAD, UG, Pro / E, JSCAST-v8 kweJapan, FLOW3D.v9.2 of America, etc.
Quality advertising UKAS & SGS ISO9001: 2008
nani Quality Kungoti kuita zvose kunyatsoongorora nguva dzose
mutengo Zvichida kwete yepasisa, asi anofanira kuva anonzwisisa uye
dhirivahari Never paya pane kukurukura nguva chibvumirano
sevhisi 1. Pose uye pose iwe kutumira mubvunzo, nguva dzose
kuwana kupindura asina kupfuura 2 kushanda mazuva.
2. Kana tine dambudziko panguva basa kubudiswa, nguva dzose
kuwana dambudziko uye kurigadzirisa kutanga mutengi,
ipapo tanga apo basa nhema, bato yedu
kana divi mutengi.
R & D Zhinji ruzivo uye unyanzvi unyanzvi pamusoro ufe Kudzingwa
chikwata United uye chikwata akanaka
Kuona unotenda, kugamuchirwa kushanyira boka redu, muchatenda kuti zvinhu zvedu uye basa zviri kwikwidzana!
Kuti uwane mashoko, anobvumirwa nesu. Ningbo HONGXIANG Mould Machinery CO., Ltd vanoda kupedza mamwe achifa Kudzingwa muzvirongwa nemi pamwe chete zvakakwana.
Garandi uye Azoridzidza-sale Services ONE-GORE garandi nguva nokuda rose muchina kunze kwezvinhu sepombi uye hwevanhu zvinhu nezvimwewo, mwedzi 18 kubva musi pamakagamuchira muchina kana 12 months apo kugadzwa rakapera;
Consultant basa muchina yose upenyu, maawa 24 hwokugadzira rubatsiro kuburikidza neindaneti;
Dana kwatiri 86-0577-65905955 86-13356198899 panguva kushanda nguva;
Ups-ushamwari Chirungu Soft-vazviziva, User Chinyorwa uye tumai expericed wevanamakanika kuti installaton & debuggin
1. Ko muchina wako zvidikanwi zvedu zvakanaka?
We achakupa pfungwa maererano yako chaiyo requirments. Ose mumuchina customized kusangana zvaunoda zvakanaka.
2. Uri fekitari kana kutengesa kambani?
Tiri fekitari, isu tichiita mutsetse ichi kwemakore akawanda.
3. Chii mubayiro wako nzira?
T / T yedu akaundi zvakananga, kana nokuda alibaba matende vimbiso basa, kana West Union, kana mari.
4. Tingaita sei nechokwadi pamusoro muchina unhu pashure tikaisa murayiro?
Usati wakurukura, isu achakumutsirai mifananidzo uye mavhidhiyo kuti kuongorora unhu, uye zvakare unogona kuronga unhu vachiongorora woga kana vokukurukura venyu rechitatu bato rokuongorora sangano.
5. Tinotya musingadi titumirei muchina pashure tinotumira iwe mari?
Ndapota onai yedu kumusoro mabhizimisi rezinesi uye chitupa. Uye kana musingadi isu kuvimba, ipapo tinogona kushandisa alibaba wezvokutengeserana vimbiso basa kana muripo nokuda LC, hunovimbisa mari yako.
6. Nei tichifanira kusarudza boka rako?
Tiri professtional mu chiputiriso michina kwemakore akawanda, uye isu kupa nani pashure-okutengesa
basa. Iwe hunovimbisa hapana ngozi yedu dhiri.
7.Need mamwe michina mashoko kana mavhidhiyo?
Tapota taura Mr.Jim zvakananga!
Tiri kukwanisa gadzirisa mashoko michina sezvawakautarira kese vade, akadai chiputiriso
akurumidze, bhegi urefu, Max chigadzirwa yakakwirira, etc. Hope pamwe nemi mune ramangwana!
Garandi uye Azoridzidza-sale Services ONE-GORE garandi nguva nokuda rose muchina kunze kwezvinhu sepombi uye hwevanhu zvinhu nezvimwewo, mwedzi 18 kubva musi pamakagamuchira muchina kana 12 months apo kugadzwa rakapera; Consultant basa muchina yose upenyu, maawa 24 hwokugadzira rubatsiro kuburikidza neindaneti; Dana kwatiri 86-0577-65905955 86-13356198899 panguva kushanda nguva; Ups-ushamwari Chirungu Soft-vazviziva, User Chinyorwa uye tumai expericed wevanamakanika kuti installaton & debuggin 1. Ko muchina wako zvidikanwi zvedu zvakanaka? We achakupa pfungwa maererano yako chaiyo requirments. Ose mumuchina customized kusangana zvaunoda zvakanaka. 2. Uri fekitari kana kutengesa kambani? Tiri fekitari, isu tichiita mutsetse ichi kwemakore akawanda. 3. Chii mubayiro wako nzira? T / T yedu akaundi zvakananga, kana nokuda alibaba matende vimbiso basa, kana West Union, kana mari. 4. Tingaita sei nechokwadi pamusoro muchina unhu pashure tikaisa murayiro? Usati wakurukura, isu achakumutsirai mifananidzo uye mavhidhiyo kuti kuongorora unhu, uye zvakare unogona kuronga unhu vachiongorora woga kana vokukurukura venyu rechitatu bato rokuongorora sangano. 5. Tinotya musingadi titumirei muchina pashure tinotumira iwe mari? Ndapota onai yedu kumusoro mabhizimisi rezinesi uye chitupa. Uye kana musingadi isu kuvimba, ipapo tinogona kushandisa alibaba wezvokutengeserana vimbiso basa kana muripo nokuda LC, hunovimbisa mari yako. 6. Nei tichifanira kusarudza boka rako? Tiri professtional mu kurongedza michina kwemakore akawanda, uye isu kupa nani mushure-okutengesa basa. Iwe hunovimbisa hapana ngozi yedu dhiri. 7.Need mamwe michina mashoko kana mavhidhiyo? Tapota taura Mr.Jim zvakananga! Tiri kukwanisa gadzirisa mashoko michina sezvawakautarira kese vade, akadai chiputiriso akurumidze, bhegi urefu, Max chigadzirwa yakakwirira, etc. Hope pamwe nemi mune ramangwana!
Next: Peugeot repair zvikamu
High Pressure Die Kandira Die
High Pressure Die Kandira Mould
2000T Automotive mafuta pani
INDIAN gamba injini assy
Communication zvikamu 3JR110608
Yachts pombi muviri